Akụkọ - gịnị bụ sucralose
Kedu ihe bụ sucralose
Sucralose edezi n'efu ka ịgbakwunye echiche nke aha ahụ
Ihe ntinye a bụ nke netwọkụ mobei nyere.
Sucralose (TGS) bụ ihe na -atọ ụtọ ọhụrụ nke Tate & Lyie na mahadum London mepụtara na patented na 1976. Splenda bụ naanị ihe na -atọ ụtọ na -arụ ọrụ dabere na sucrose, nke akpọburu Splenda, nke dị okpukpu narị isii karịa sucrose. Ihe na -atọ ụtọ a enweghị ume, ụtọ dị elu, ụtọ dị ọcha, nchekwa dị elu na njirimara ndị ọzọ. Ọ bụ otu n'ime ihe na -atọ ụtọ na -arụ ọrụ kacha mma.
Sucralose ma ọ bụ TGS CNS: 19.016; INS: 955), makwaara dị ka Sucralose, sucrose ma ọ bụ 4, 1, 6, -trichloro -4, 1, 6, -trideoxygalactose sucrose, aha bekee: Sucralose. A na -akwadebe Sucralose site na sucrose site na chlorination. Usoro molekul bụ C12H19Cl3O8 na ịdị arọ molekul bụ 397.64.
Ozi bụ isi
Aha ndị mba ọzọ
1 Ozi Mbụ
2. Data anụ ahụ
3 Ụzọ nchekwa
4 Ụzọ njikọ
5 Isi eji
6 Usoro sistemụ
7 data toxicological
8 Data Chemical
9 Ihe Ọmụmụ Ebe obibi
Mkpakọ iji dezie akụkụ a nke ozi bụ isi
Aha ndị China: sucralose
Aha Bekee: Sucralose
Aha aha ndị China: sucralose
CAS ọ dịghị. : 56038-13-2
Ụdị usoro: C12H19Cl3O8
Ibu molekul: 397.6335
Mkpakọ iji dezie akụkụ a nke data anụ ahụ
1. Njirimara: Na-acha ọcha ka ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ kristal kristal, enweghị isi, enweghị hygroscopic. Njupụta (g/mL, 15ºC): 1.357
3. Njupụta ikwu: 1.66 (20ºC)
Ebe na -agbaze (ndakpọ): 125ºC
Ebe esi esi (ºC): 104-107
Ebe a na -esi esi (ºC, 0.5mmHg): edozighi
7. Refractive index: bụghị kpebisiri
8. Ebe ọkụ (° F): ejighị n'aka
9. Ntughari anya anya (ºC): ekpebighị ya
10. Ebe mgbanye ọkụ ma ọ bụ ọnọdụ mgbanye ọkụ (ºC): ekpebighị ya
11. Nrụgide uzuoku (kPa, 25ºC): ekpebighị
12. Nrụgide uzu mmiri juru (kPa, 60ºC): ekpebighị ya
13. Okpomọkụ nke combustion (KJ/mol): ekpebighị
14. Ọnọdụ okpomọkụ (ºC): ekpebighị ya
15. Nsogbu dị oke egwu (KPa): ekpebighị ya
16. Uru logarithm nke mmiri-mmanụ (octanol/mmiri) nkewa nkewa: edobeghi
17. Oke nke mgbawa (%, V/V): ekpebighị ya
18. Oke ịgbawa nke mgbawa (%, V/V): ekpebighị ya
19. Solubility: mfe soluble na mmiri, ethanol na methanol, ntakịrị soluble na ether.
Debe usoro nchekwa ngalaba a
Akpa plastik ọkwa nri na akpa akwụkwọ kraft. Na -echekwa na ebe dị jụụ na akọrọ
Fold dezie usoro njikọ ngalaba a
1. N'iji sucrose dị ka akụrụngwa, enwetara sucralosucrose site na triphenylmethylation (na -echebe otu hydroxyl atọ bụ isi), acetylation (na -echebe otu hydroxyl ise nke abụọ), mwepụ nke triphenylmethyl, mbugharị otu acetyl, chlorination, deacetylation, wdg.
Enwere ụzọ nkwadebe nke sucralose: ụzọ otu ester, ụzọ enzyme-kemịkalụ na ụzọ mbufe otu. Ụzọ abụọ nke mbụ na-echebe naanị otu hydroxyl, yabụ enweghị ike ịchịkwa ogo nke nnọchi n'oge chlorination, na ngwaahịa na-esite na ya bụ ngwakọta, ọkachasị usoro otu-ester nwere ike ibute mbibi nke sucrose na-amịpụta fructose ester. Agbanyeghị, usoro mbugharị otu na -echebe ọtụtụ otu hydroxyl na mbido, ka mmeghachi omume chlorination na -eche ihu, enwere ike nweta otu ngwaahịa na -enweghị teknụzụ nkewa pụrụ iche, yana mkpụrụ ya ruru 36%.
Collapsible dezie isi ojiji nke ngalaba a
Sucralose bụ ihe na -atọ ụtọ a kwadoro na China. Ụtọ ya dị ihe dị ka okpukpu isii nke sucrose, ụtọ ya dị ụtọ dịkwa ọcha. Ọmarịcha agwa ya na ịdị ụtọ ya yiri nke sucrose. Na nhazi nri na usoro ịchekwa nri siri ike, mmiri nwere ike ịgbaze, dabara maka ụdị nhazi nri niile. Enwere ike iji iwu China maka ihe ọ drinksụ drinksụ, pịkụl, ihe ndị na -atọ ụtọ, mmanya, ice cream, achịcha, bisiki, achịcha na ọtụtụ ubi ndị ọzọ.
Gbanye ma dezie nọmba sistemụ nke ngalaba a
Nọmba MDL: MFCD03648615
EINECS enweghị. : 259-952-2
Nọmba RTECS: LW5440140
Nọmba BRN: 3654410
Gbanye ma dezie akụkụ a nke data toxicology
1. Ogbugbu: LD50 (oke, ọnụ) 16g/kg (BW); (Oke, ọnụ) 10g/kg (bw).
Mkpakọ iji dezie ngalaba kemịkal a
1, uru ntụnye ngụkọ ọnụọgụ hydrophobic (XlogP): -1.5
2. Ọnụ ọgụgụ ndị nyere onyinye nkekọ hydrogen: 5
3. Ọnụ ọgụgụ ndị nabatara njikọta hydrogen: 8
4. Onu ogugu nke agbaghari: 5
5. Ọnụọgụ nke ndị na -akụ aka:
6. Topological molekul polar surface area (TPSA): 129
7. Atọ dị arọ: 23
8, ụgwọ elu: 0
9. Mgbagwoju anya: 405
10, nọmba atọm isotope: 0
11. Kpebie ọnụọgụ nke ogige ihe owuwu: 9
12. Onu ogugu atumatu atumatu ejighi n'aka: 0
13. Kpebisie ike ọnụọgụ ụlọ ebe njikọ kemịkal dị: 0
14. Ọnụọgụ ụlọ ebe njikọ agbụ ejighị n'aka: 0
15. Ọnụọgụ nke njikọ njikọta covalent: 1
Mkpakọ iji dezie akụkụ a nke data gburugburu ebe obibi
Ekwela ka ngwaahịa na -adịghị emebi emebi ma ọ bụ buru ibu bata na mmiri ala, ụzọ mmiri ma ọ bụ sistemụ nsị, ma ewepula ihe na gburugburu gburugburu na -enweghị ikike n'aka gọọmentị.
Fold dezie akụkụ ihe onwunwe a
Ọ naghị erekasị ma ọ bụrụ na ejiri ya ma chekwaa ya dịka nkọwapụta siri dị na enweghị mmeghachi omume ọ bụla dị ize ndụ
Koodu kọstọm: 2932999099
Koodu klaasị dị ize ndụ: R36/37/38
Nkọwa nchekwa: 26-37/39
Onye na -achọpụta ngwongwo dị ize ndụ: Xi: Iwe;
Omenala ndị China (2932999099)
Isi 2932999099. Ogige heterocyclic ndị ọzọ nwere naanị hetero atọm. VAT ọnụego: 17.0%. Ọnụ ego nkwụghachi ụgwọ: 13.0%. Ọnọdụ nlekọta: Ọ nweghị. Ọnụ ego MFN: 6.5%. Ọnụahịa niile: 20.0%
Ogige heterocyclic ndị ọzọ nwere Oxygen Hetero-Atom (s) naanị. Ụtụ: 17.0%. Ọnụego nkwụghachi ụtụ: 13.0% .. MFN metụtara azụmahịa: 6.5% Generalzụ ahịa metụtara: 20.0%
Ụzọ njikọ (9 na mkpokọta)
Ngwa elu na ala ala
Ngwaahịa dị n'elu (10 na mkpokọta)
A na -akpọ Trimethyl acetate